TOGAF အဆိုပါဖွင့်ပါအုပ်စုဗိသုကာမူဘောင်များအတွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဗိသုကာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်, စီစဉ်, ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းတခုပေးသည်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-Level ဗိသုကာမူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကတိုက်ရဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ကာကွယ်ရေးနည်းပညာဗိသုကာမူဘောင် (TAFIM) ပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့် The Open ကို Group ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖွင့်ပါအုပ်စုထက်ပိုငါးရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူရောင်းသူတစ်ဦးနှင့်နည်းပညာဘက်မလိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစုနှင့်စာမေးပွဲရှင်းလင်းရေးများအတွက်မူလတန်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး TOGAF အတည်ပြုန်ထမ်းများ၏နိယာမအမှတ်အစီအစဉ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြည်နယ်လမ်းလက်ခံနေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အထွေထွေကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်တန်းတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူလုပ်ငန်းဗိသုကာဖြစ်ရှာနေတဲ့ပြိုင်ဘက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ တစ်ဦးက TOGAF လက်မှတ် တံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုတွေကမှားစရာထားစတော့ရှယ်ယာဖြစ်ပါသည်
●ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစွမ်းရည်ဖန်တီးခဲ့ကြခြင်းနှင့်ထိရောက်စွာတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ '' ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှ TOGAF အကောင်အထည်ဖော်မည်လော
TOGAF အစီအစဉ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြည်နယ်လမ်းကူးပြောင်းနေရာကတည်းကဒါဟာပုံမှန်တိကျတဲ့စီးပွားရေး, လျှောက်လွှာ, ဒေတာနှင့်နည်းပညာဖြစ်မည်ဟု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ Composite စဒေသများ၏4အဆင့်ဆင့်ကိုပြသနေသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗိသုကာပညာ - ဒါဟာအသင်းအဖွဲ့များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အုပ်ချုပ်ရေး, အသင်းအဖွဲ့နှင့်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောအရာဖြစ်ပါသည်
လျှောက်လွှာဗိသုကာပညာ - စေလွှတ်ခံရဖို့တစ်ဦးချင်းစီမူဘောင်ဖို့လျှောက်လွှာမူဘောင်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးဟာအလှနျစီးပှားရေးလုပျငနျးပုံစံများအကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီပုံပေးသောကြောင်း
ဒေတာကိုဗိသုကာပညာ - တခုအသင်းအဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေတာအရင်းအမြစ်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ဆိုင်မှုသရုပျဖျောသောအရာ။
နည်းပညာဆိုင်ရာဗိသုကာပညာ - အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ, programming နဲ့နိယာမ application များအတွက်လိုအပ်သည့်ကွန်ရက်သည်မူဘောင်
အဆိုပါတက်သည်ကိုပြသအရည်အချင်းပြည့်မီသူ TOGAF လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
တစ်ဦး TOGAF 9.1 လက်မှတ်ရတဲ့အဘို့အဘယ်သူမျှမအရည်အချင်းများသတ်မှတ်ချက်ရှိပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဦးလျှောက်ထားသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနေနဲ့လုပ်ငန်းဗိသုကာတက်လေဖို့လိုင်စင်ရအသင်းအဖွဲ့များ၏စာမေးပွဲရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
စာမေးပွဲ၏ Levels ၏အဘယျအရေအတွက်ကိုရှင်းလင်းခံရဖို့ရှိပါသလဲ
တစ်ဦး TOGAF 9.1 ၏ငြူစူပြိုင်ဘက်ဟာ TOGAF 1 လက်မှတ်များအတွက် TOGAF ဖောင်ဒေးရှင်းမှသင်တန်းနှင့်အဆင့်2နှစ်ခုစာမေးပွဲ, အဆင့် 9.1 ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကိုအားဖြင့်အာရုံပေါ်စီစဉ်မျှော်လင့်ချက်အလွန်တခါမှာတဦးတည်းအဆင့်ကိုရှင်းလင်းဖို့အားပေးခံရလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပြင်ဆင်နေရိုးအမြစ်ကိုပြိုင်ဘက်များအတွက်သုံးသပ်နှင့်တဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအဆင့်ကိုရှင်းလင်းနိုင်မထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏သင်တန်းများဖော်ပြထားပါပြီ။4နေ့ရက်ကာလအဘို့နှင့် Self-ဆန်းစစ်ဘို့စည်းကမ်း2ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်တည်ထောင်အတူပြင်ဆင်မှုအချိန်ဘောင်ဖြစ်ပါသည်
1 ။ level တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကအဆင့်ကို - လိုအပ်သောဖြတ်သန်းနှုန်းမှာအလေးပေး 55 ထဲကအလွန်အစွန်းရောက်ထဲက 22 ဖြစ်သော 40% ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတစ်တိုက်ပိတ်တံဆိပ်ခေါင်းသယ်ဆောင်တစ်ခုချင်းစီကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဆုံးဖြတ်ချက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
2 ။ level နှစ်ဦးသို့မဟုတ်လက်မှတ်အဆင့်ကို - လိုအပ်သောဖြတ်သန်းနှုန်းမှာအလေးပေး 60 ထဲကအလွန်အစွန်းရောက်ထဲက 24 ဖြစ်သော 40% ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတစ်တိုက်ပိတ်တံဆိပ်ခေါင်းသယ်ဆောင်တစ်ခုချင်းစီကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
3 ။ level One နဲ့နှစ်ဦးပေါင်းချုပ် TOGAF 9.1 - စာမေးပွဲနှစ်ခုအပိုင်းပါဝင်သည်။ အဆင့်နှစ်ဦးစက္ကူတစုံတယောက်သောသူသည် segment ကိုသူတစ်ချိန်ကပိုပြီးစာမေးပွဲ၏ re-ယူမယ့်အဲဒီဒေသမှာမှသည်ဆနျးစစျဗုံးကြောင်းသို့သော်ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်အထက်ကဆိုပါတယ်အဖြစ်နှစ်ခုအထက်နှင့်ပုဒ်မသတ်မှတ်ထားသောအဆင့်တစ်ခုမှာစက္ကူအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ပုဒ်မတဦးတည်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်နှစ်ခု Levels နဲ့ရှင်းလင်းဖို့ပြိုင်ဘက်ကို enable နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခု Levels အဆိုပါခွင့်ပြုခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအဘို့ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည် Togaf 9.1 certificaiton.
နှစ်ခုကြိုးပမ်းအကြားအပေါက် - fizzled ကြိုးပမ်းအကြားတစ်လ၏အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပါတယ်ဖြစ်ရမည်။ တစ်ခုလျှောက်ထား 25th ဇွန်လသည်အထိအတို 2017th, ဇွန်လ 27, အတက်ကိုင်ကာလတခုတခုအပေါ်မှာစာမေးပွဲဖြေဆိုထကြွလာလျှင်ဥပမာ, 2017 ထံသို့ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ မတိုင်ခင်ကွိုးစားမဆိုစာမေးပွဲဖြေဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါစာမေးပွဲ Pearson Vue မှာဖြစ်စေဖြစ်ပျက်ဟာဆနျးစစျစာအုပ်ကတဆင့် peruse နှင့်ပစ္စည်းမှညှနျးဖို့ကို PC screen ပေါ်မှာစာမေးပွဲကြားတွင် "ကိုကိုးကား" tab ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျသော, အမြိုးမြိုးတို့တှငျအလေးပေးနှင့်ပွင့်လင်းစာအုပ်စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအွန်လိုင်းစာမေးပွဲပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာပြအာရုံစူးစိုက်အွန်လိုင်းစာမေးပွဲများအားပေးလိမ့်မည်ဟုနှင့်ဧကန်အမှန်ပင်၎င်းတို့၏သင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံ၏အင်္ဂါရပ်အဖြစ် deride တက်မူကွဲနှင့်အတူတစ်နှစ်စမ်းသပ်၏အဆုံးအဘို့အသငျသညျပွငျဆငျခွငျးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး၏သိသာထင်ရှားသောထိတွေ့ရည်ရွယ်ချက်များဘာတွေလဲ TOGAF လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်း
အဆိုပါကတည်းက TOGAF လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းအမှတ်စဥ် တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗိသုကာများ၏စွမ်းရည်များပ္ပံတိုးတက်အောင်များအတွက်သွားပြီ, သင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာကျယ်ကျယ်ဖုံးလွှမ်း:
ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်တွင်ဗိသုကာပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Method ကို
လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်နှင့် Tools များ
ဗိသုကာ partition, အုပ်ချုပ်ရေး, အခြေခံမူများနှင့်ဒါဘွား။
, ဗိသုကာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ Metamodel အကြောင်းအရာမူဘောင်နားလည်ပါတယ်။
ဗိသုကာအကူအညီနဲ့စနစ်များနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများ၏ comprehension ၏အကောင်အထည်ဖော်ရေး,
ADM ၎င်း၏လိုအပ်ချက်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ADM ၏ကွဲပြားခြားနားသောချိန်ညှိနားလည်သဘောပေါက်
အဆိုပါ Maturity & Models နားမလည်နှင့် Business ဗိသုကာများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင်
တစ်ဦး TOGAF 9.1 လက်မှတ်ဘို့ပြင်ဆင်နေ၏ပစ္စုပ္ပန်ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ?
In-class ကိုတစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးသင်တန်းများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား - ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူတကွလက်မှတ် INR 75,000 အကြောင်းကိုဝန်းကျင်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးဖယ်ကုန်ကျစရိတ်ကနေ, ကနိဂုံးချုပ်ရှေ့တော်၌ထိုပြင်ဆင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်၎င်း၏မူဘောင်ကိုစစ်ဆေးအရေးကွီး၏။
TOGAF 9.1 လက်မှတ်သင်တန်း၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးပြီးနောက်အနာဂတ်အလားအလာကဘာတွေလဲ
လျှောက်ထားသူက enterprise level ဗိသုကာတစ်ဦးလေးနက်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုတက်ဘို့တည်ဆောက်ကြမည်ကတည်းကအနာဂတ်အလားအလာများပါဝင်သည်:
MNCs, နှင့်ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံအဖြစ်ငှါး၏။ ယနေ့ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကမျှအဖွဲ့အစည်းထူထောင်တဲ့သန်စွမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗိသုကာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်
ကွဲပြား, အစီအစဉ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်လျော်ကြေးငွေဆွဲကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကာလုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုမူဘောင် actualize
TOGAF 9.1 လက်မှတ် တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ညာဘက်မူဘောင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်, ထိရောက်စွာကွဲပြား ပတ်သက်. အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားအပေါ်ဖော်ပြနိုင်ရန်စွမ်းရည်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တိုင်းအသင်းအဖွဲ့, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးဘို့မယ်, နားမလည်ဖြိုဖျက်ထိုနောက်မှလှုပ်ရှားမှုများများ၏အောင်မြင်မှုအဘို့အညာဘက်အဖြေကိုရစေနိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Model လိုအပ်ပါသည်။
TOGAF သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရဖို့ 10 အကြောင်းရင်းများ